Xoghayaha cusub ee dowladda Hoose Garowe oo maanta xilka la wareegay (Sawirro) | Waayaha
You are here: Home 2015 November Xoghayaha cusub ee dowladda Hoose Garowe oo maanta xilka la wareegay (Sawirro)
15 November, 2015(WN)-Xogahayaha Cusub ee Degmada Garoowe Cabdiqafaar Cabdiraxmaan Shiikh Axmed ayaa maanta ayaa xilka kala wareegay xoghayihii hore mudane Qaasim Maxamed Cabdi, ka dib munaasibad lagu qabtay xafiiska mamulka.
Duqa degmada Garowe Xasan Goodir iyo masuuliyiin kale ayaa goobjoog u ahaa xil wareejintan.
Xoghayihii hore Qaasim Maxamed Cabdi ayaa khudbad uu munaasibadda ka jeediyay wuxuu kaga hadlay waxyaabihii u qabsoomay lixdii sano ee uu xilkan hayay, wuxuna sheegay inuu meel wanaagsan gaarsiyay shaqadda mamulka dowladda hoose, iyo xoojinta mamulka xaafadaha caasumadda, Qaasim wuxuu ballan qaaday inuu si wanaagsna ula sii shaqayn doono mamulka cusub.
Xoghayaha cusub ee dowladda hoose mudane Cabdiqafaar Cabdiraxmaan Axmed ayaa u mahad celiyay dhammaan masuuliyiintii kasoo qayb galay, waxa kale uu ammaanay shaqadii uu soo qabtay xoghayihii ka horeeyay ee xilka ku wareejiyay, isagoona sheegay inay tahay shaqadda Xoghayaha mida ugu culus ee mamul kasta.
Cabdiqafaar Axmed ayaa balan qaaday inuu shaqada halkaa kasii wadi doono, sidoo kale waxa uu sheegay inuu la iman doono waxqabad muuqda muddada uu xafiiska joogo.
Duqa Garowe Xasan Maxamed Ciise (Goodir) ayaa xoghayihii hore ku ammaanay hoowsha uu soo qabtay waxa kale uu sheegay inuu si weyn ula shaqayn doono xoghayaha cusub ee maanta xilka la wareegay.
Wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha Cabdilaahi Xaaji Qoobdeero ayaa dhowaan warqad digreeto ah kusoo magacaabay Cabdiqafaar Cabdiraxmaan, ka dib markii dib loo celiyay warqad kale uu wasiirka arrimaha gudaha Axmed Karaash soo saaray.